Ny Marriott International dia nanambara ny fisokafan'ny isa efatra an'i Sheraton Setif
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny Marriott International dia nanambara ny fisokafan'ny isa efatra an'i Sheraton Setif
Ny Marriott International dia nanambara ny fanokafan'ny Sheraton Setif Points in Four any Four Points, miaraka amin'ny Prombati SPA an'i Rachid Khenfri. Miaraka amin'ny efitrano 191 dia mipetraka eo afovoan-tanàna ny trano fandraisam-bahiny, manome fidirana mora mankany amin'ny làlamby vaovao an'ny Setif sy ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Setif 20 minitra miala eo fotsiny. Ny tilikambo hotely maoderina dia avo ambonin'ny tanàna ary miorina amin'ny iray amin'ireo faritra irina indrindra ao Setif izay feno tantara ary voahodidin'ny tsangambato nasionaly nanomboka tamin'ny Fanjakana Berber sy ny Fanjakana Romanina.
“Points efatra avy amin'i Sheraton Setif no fananana fahasivy an'i Marriott International any Algeria ary fanampiny lehibe amin'ny portfolio mivoatra haingana ao Afrika Avaratra. Miorina amin'ny faritra lehibe ao afovoan-tanàna ny hotely dia manolotra traikefa fandraisam-bahiny fantatry ny be sy ny maro izay mifanaraka amin'ny filan'ny mpandeha maoderina ankehitriny, "hoy i Alex Kyriakidis, filoha sady talen'ny fitantanana, Moyen Orient sy Afrika, Marriott International.
Henricus Broekhoven Tale Jeneralin'ny Points efatra avy amin'i Sheraton Setif dia naneho hevitra hoe: "Faly izahay manokatra ny Four Points nataon'i Sheraton Setif napetraka tao amin'ny faritra manan-tantara sy notadiavina. Ny trano fandraisam-bahiny dia manolotra traikefa fitsangatsanganana tsy misy pitsiny miaraka amin'ny efitrano malalany, toerana mety sy fotodrafitrasa maro karazana. Manantena ny hanompo ny vahininay izahay amin'ny serivisy mafana sy tena izy izay fantatry ny marika Four Points. ”
IMEX Frankfurt: ny mpikabary fanabeazana dia misy moanina taloha, mpamorona lalao ary 'geeks teknolojia'
Telo novonoina tamin'ny fanafihan'ny mpampihorohoro Utrecht, ahiahiana Tiorka nandositra